Indlu engasemva enomtsalane enesikhephe esiqeshisayo - I-Airbnb
Indlu engasemva enomtsalane enesikhephe esiqeshisayo
Ifama sinombuki zindwendwe onguVidar
I-wifi ekhawulezayo ye-161 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwindawo esetyenziswa ngumntu wonke.
Wamkelekile kwindlu engasemva, kwifama yeSøndre Atlanes. Ifama ifumaneka eNamsenfjorden kwaye apha senza imveliso yobisi yesintu.
Indlu engasemva ininzi ibe itofotofo. Ilungele abo bahamba bodwa, kodwa kwintsapho/iqela. Abantu abakhubazekileyo bavumelekile. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile (inja nekati). Umntu ohambayo uyayilahla indlu yodwa.
Iintsuku esinazo zikunika indawo yasemaphandleni, iindawo ezintle onokuzibona, iindawo zokunyuka intaba ehlathini nasezintabeni, ukufikelela elwandle, amathuba okuqesha: isikhephe, i-kayak, izixhobo zokuloba. Kwaye amaqanda amatsha kunye nobisi.
Ifama ikwindawo ehlala abantu, iikhilomitha eziyi-16 ukusuka embindini weNamso. Indlela iphela ikhilomitha eyi-1 ngaphaya kwefama.
Le fama ikwi-1100 da, inomhlaba ongu-180 da/umdiliya wasemaphandleni kwaye ikwintsapho yezizukulwana eziliqela.
Indawo yokuhamba ejikeleze thina idla ngokuba ngumhlaba wehlathi elihle laseNamdal, kwaye ukuba ufuna ukunyuka intaba unamathuba angaphantsi kwe-radius emfutshane.
Indlu yeendwendwe inento eninzi ibe ijonge kumzantsi/entshona yolwandle. Kukho indawo eninzi yokupaka ngaphandle kwendlu, apho kukho nendawo yokudlala enokulahlwa.
Kwindlu esemaphandleni uza kufumana:
- Ikhitshi elinento yonke elinesitovu/ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokwenza ikofu nento yokucofa.
- itafile yasekhitshini enezihlalo zabantu abayi-4 (6)
- igumbi lokuhlambela evulekileyo eline-shower cubicle, ithobhi lamanzi, isinki kunye nomatshini wokuhlamba impahla
- i-sofa nook, i-TV kunye
ne-Chromecast - i-treadmill -
i-loft enokulala okanye indawo yokuhlala. Isango lezitepsi elixhonywe phezulu
- ipani yomlilo -
- iindawo zokulala:
- igumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini:
150xwagen - - ibhedi eyisofa kwikhitshi elincinci: 120x200
- - ibhedi eyisofa ekhayeni:
120x200 - - oomatrasi abayi-2 abalungileyo kwiloft:
80x200 - - sinokubonelela ngebhedi yosana/ibhedi yosana, nceda usazise
Ezinye izinto ezinokusetyenziswa:
- Ukuqeshiswa kwesikhephe ngeli xesha ukususela nge-15 ka-Aprili ukuya nge-15 kaSeptemba. 16'' aluboat, kunye ne-50hp engine. Ukubethwa ngumoya kusisinyanzelo. Ixabiso losuku 400 noK
- irente ye-kayak (1wagen). Ibhatyi yobomi ayinyanzelekanga. Ixabiso losuku yi-100 kr.
- ukuqesha izixhobo zokuloba (ngepali nganye kunye neentlobo ngeentlobo). Ixabiso losuku € 10.
Sineebhatyi zobomi ezikhoyo, nceda uqhagamshelane nathi.
Ukuba unokucinga ngamaqanda amatsha okanye ubisi olutsha, nceda uqhagamshelane no-.
iisofa ezikwazibhedi eziyi-2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1, Ibhedi encinci eyi- 1
I-wifi ekhawulezayo – i-161 Mbps
Le ndawo isemaphandleni amancinci aphumayo kumantla eNamsenfjorden. Kukho izindlu eziliqela zokuhlala nezindlu zamaplanga kule ndawo ezibiyelwe ngamahlathi amancinci, ukongezelela elwandle. Kukho izilwanyana ezifuya ehlotyeni kwindawo
Umbuki zindwendwe ngu- Vidar
Driver Søndre Ganes Gård sammen med Hilde Ganes Skjærvø. Her drives melkeproduksjon med kvote på ca 250 tonn.
Singummelwane wakho osondeleyo kwaye siyafumaneka ukuba sincokole. Ukuba unemibuzo, nceda uqhagamshelane no- ngomyalezo ku-airbnb okanye ngefowuni 90110268 (Vidar)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Namsos